Macallin Canan ayaa ku dhintay shil tareen | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean09 AydinMacalin Canaan wuxuu ku dhintay shil tareen ah
12 / 11 / 2014 09 Aydin, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Macallinka Canan wuxuu ku dhintay shil tareen: Canan Azazi (44), macalin dugsi hoose oo ku yaala Aydın, ayaa ku soo noqdey habeenkii fiidkii waxaana ku dhintay tareenka. Heerka macallinimada ee Canan iyo inkastoo calaamad digniinta ah ay barteen in jidka tareenku ka soo galo waddada. In kastoo ay jirto calaamadda digniinta iyo booliiska ka dib shilka, muwaadiniintu waxay sii wadaan inay sii maraan meelaha lugta ah ee tareemada ee soo jiidanaya
Dhacdadan, Aydin Mimarsinan xaafadda Aymas Galericiler Site fiidkii oo ku yaala wadada lugta iyo gawaarida ayaa ka dhacay isgoyska heerkulka. Canan Azazi oo doonaya in ay ka soo gudubto tareemada, jihada İzmir ee Aydin oo ku taal jidka Erkan B. 34007 ee hoos taga maamulka tareenka xamuulka ayaa ahaa lambarka. Macalin Canan ayaa hoos u dhacay tareenka mitirka 50, oo si xun u geeriyooday.
Shilkii ka dib, khadka tareenka ee Aydın-İzmir ayaa lagu xidhay gaadiidka tareenka, halka dadku sii waday in ay isticmaalaan tareenka waddada tareenka halkaas oo shilku dhacay iyo isgoysyada la mamnuucay. Muwaadiniinta daryeesha calaamadku waxay sii wadeen inay ka gudbaan wadada.
Maareeyaha Qorshaha Qorshaha Ayden Gobolka Sabaniyat Azazi laba bilood ka hor sababtoo ah go'aaminta in lagu noolaado Nevsehir wuxuu bartay in kelidii noolaa. Canan macalin Canan ah ayaa laga saaray meydka Isbitaalka Gobolka ee Isbitaalka Gobolka. Bilayska, macalimiinta qaraabada ee shilka 'shilka' ayuu wargeliyay.
Maanta taariikhda: 3 Febraayo 1941 ayaa lagu dilay shil tareen 12 oo u dhaw Aydinenc Germencik
Dhibbanaha dhibbanaha ayaa ku dhintay shil tareen
Wiilka caanka ah ee ruugcada ah oo ku dhinta tareenka xamuulka
2 Magangelyo-doonka ayaa ku dhinta dhacdada tareenka ee Alexandroupoli
Maanta taariikhda: 30 April 1961 Shil gaari oo ka dhacay Istanbul Kartal 16 ayaa la dilay.
Maanta taariikhda: 30 April 1961 Shil gaari oo ka dhacay magaalada Kartal ee magaalada 16 ayaa dhintay
Xarunta Magaalada Antalya ee Nidaamka Tareenka
Trabzon Railway iyo Logistics